अलमलिएको युवाशक्ति र देशकोे स्थिति SULSULE:A Truly Nepali News Portal
अलमलिएको युवाशक्ति र देशकोे स्थिति
२०७७ जेठ ७ मा प्रकाशित
कार्यकारी सारांश : देशमा जनशक्ति योेजनाको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले लयाएको विषम परिवेशका कारण धेरै नेपाली बाहिरिएका थिए । हाल विश्वव्यापी कोरोना संकट र त्यसबाट उत्पन्न परिवेशले विदेशस्थित धेरै नेपालीहरूले स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । विदेशस्थित एक तिहाई नेपाली मात्रै पनि एकै पटक स्वदेश फर्कन पर्ने अवस्था आयो भने मुलुकले कठीन परिवेश व्यहोर्नु पर्नेछ भनी यसअघि पटक पटक भनिँदै अएको हो । अहिले बाध्यता छ, नेपाली माटोको माया गर्दै लाखौँ जनशक्ति फर्कने अवस्थामा छन् र त्यसको व्यवस्थापन कार्य अहिले सरकारलाई मात्रै होइन समग्र सामाजिक परिवेशलाई नै टाउको दुखाइ बनेको छ । अर्बौ रकम विप्रेषणका रूपमा पठाएर देशको आर्थिक परिवेशलाई न्यानो पार्ने हाम्रा नेपालीहरू अधिकांश युवा नै छन् ।
मुलुकको सामजिक र आर्थिक रूपान्तरण युवाशक्तिकै हातमा हुन्छ । सामाजिक सद्भावको अभिभारा युवा शक्तिमा हुन्छ । सांस्कृतिक रूपान्तरण युवा जिम्मेवारीकैै विषय हो । राजनीतिक रूपान्तरणमा युवा शक्तिकै हात रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा अधिंकाश परिवर्तनहरू युवा शक्तिबाटै भएका छन् । तर, त्यही युवाशक्ति मुलुकबाट पलायन छ । ती अहिले कोही युरोप, अमेरिकामा छन् त कोही जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया प्रतिभा पलायनकै कारण छन् भने खाडी मुलुक श्रम रोजगारीका खोजिमा पनि कम छैनन् । यता देश भने नराम्रो आर्थिक मन्दीमा फसेको छ, चौतर्फी सीमा समस्यामा अड्केको छ । राजनीतिक दलभित्र किचलो छ । गुट र उपगुटमा पर्दा देशका मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
सत्ताका ठूला–ठूलाहरू कोही अपहरण काण्डमा कोही के काण्डमा फसिरहेका छन् । नेतृत्वमा टकराव छ । बहनाहरू बनाउँदै बैठकहरू सर्ने क्रम छ । सिमा अतिक्रमणमा जनस्तरमा तीव्र विरोध छ । विरोध गर्नेहरूको धरपकड पनि कम छैन । सधैँ किचलो राख्नुभन्दा सुगौली सन्धिपछिको दुई देशको सीमा नक्सा भिडाएर उच्चस्तरीय टेवल टक गरी नक्सा कोर्न के कठिनाइ प-यो थाहा छैन । यता कोरोनाले काठमाडौँलाई भूकम्पभन्दा ठूलो फेरि एक पटक नराम्रो झट्का हानेको छ । देशमा जनशक्ति परिचालनको अवस्था नाजुक छ । विगतमाझैं आकर्षक र मनै लोभिने खालको नीति कार्यक्रम पनि भर्खरै देशले पाइसकेको छ ।
कुरोको चुरो : विश्वको समृद्धि प्राप्त मुलुक जापानले वृद्धहरूको सम्मान गरेको छ भने दिन दुई गुणा र रात चौगुणाले विकास गर्ने मुलुक थाइल्याण्डमा युवा शक्तिको गतिलो परिचालन भएको छ । सिर्जनशीलता अनि साहस, सिक्ने क्षमता र उच्च आत्मविश्वास युवाशक्तिमा रहेको हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासमा, नेतृत्व विकासमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने सकिए मुलुकको समृद्धि टाढा हुन्न । गुण्डा, मुद्रे र डनको हिसाबमा प्रयोग भए त्यही युवा शक्तिले मुलुकमा भारी उच्छृङ्खलता पनि ल्याउन सक्छ । नेपालको कुल जनसंख्यालाई विश्लेषण गर्दा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू ४१ प्रतिशत रहेका छन् । हाम्रा ती सबै युवा शिक्षित, सीप सम्पन्न, अनुसाशित र उद्यमशील हुने हो भने हामीले सोचेको विकासको रफ्तार टाढा हुन्न । युवा जनशक्ति भनौँ मानव पुँजी पलायन हुन नदिने र श्रमशक्ति मुलुकमै प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारको हो । सबैलाई सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भने गर्न सक्छ । मुलुकमा अहिले सरकार स्थीर छ तर नीति स्थीर छैन । रोजगारीको अवसर नै छैन । नाना, खाना र छानाकै लागि युवाशक्ति विदेशिएको हो । आफू र आफन्त आश्रित बुढाबुढीहरूको सपना पूर्तिका लागि पनि घरजग्गा बेचेर ऋण काढेर युवाशक्ति देशबाट पलायन भएको हो ।
उद्योग, उद्यमशीलता, लगानी भनौँ रोजगारीका क्षेत्र युवामैत्री भएन । कुनै पनि सरकारी काम बढी प्रक्रियामुखी झन्झट र अपारदर्शी भयो । पोलपोलमा उभिएर सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरे पनि युवाहरूले पत्याएनन् । रोजगार दाताको सूचीकृत संख्या नगन्य छ । रोजगारदाताहरू यस अभियानमा उत्साहित नभएको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गरी उद्यमशीलतामा, उद्योगमा युवाशक्ति सरिक गराउने काममा लघु, घरेलु साना उद्योगहरूको बढी हात हुन सक्छ । तर, यसै क्षेत्रबाट सामाजिक सुरक्षा अभियानमा खासै चासो दिएको देखिदैन । प्रचार निकै गरिए पनि सुरुवाती चरणमै यो विफल देखियो ।
हाल मुलुकका धेरै निजी क्षेत्रमा भनौं सञ्चार, दूरसञ्चार, शिक्षा, सहकारी एवं बैंकहरूमा धेरै युवाशक्ति परिचालित छन् । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको निजी क्षेत्रको संलग्नताले युवा रोजगारी सिर्जनामा धेरै सहयोग पुगेको हो । तर, कोरोेना सन्त्रासबाट भएको लकडाउनका कारण यी संस्थाहरू तत्कालै उठ्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । कतिले भएका रोजगारी पनि गुमाउन सक्लान् । अहिले भन्न पनि सजिलो छ समृद्ध देश अमेरिकामै रोजगारी गुमाउने धेरै भए । कोरोनाकै कारण त्रैमासिक खर्च धान्न उसले ३० खर्ब डलर ऋण लियो । यहाँ पनि विकास ऋणपत्रहरूको योजना आइरहेको छ ।
हाम्रो सरकार भन्छ धेरै राहत खोज्ने हो भने कर बढाउनु पर्छ । खर्च कटौती गर्नसक्ने धेरै आधारहरू छन् त्यतातिर ध्यान दिनुभन्दा अफिस सञ्चालनकै लागि एउटैको डेढ करोड पर्नेे महंगो गाडी किन्न सरकार पछि पर्दैन । सरकार मीठा भाषण दिन खप्पिस छ । स्वदेशमा शिक्षाकोे वातावरण तय भइसकेको छैन । मध्यम र उच्च शिक्षा प्राप्त युवा शक्ति विदेश पलायनबाट कसरी रोक्ने त्यसतिर आँखा लाउनु पर्ने हो । मुलुकभित्रै आर्थिक, उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुने अवसर पाए कसैलाई विदेश जाने रहर हुँदैन । व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभाव छ मुलुकमा युवा जोस र जाँगरको प्रयोग हुनेगरी दिइने तालिम, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाको अभाव छ यहाँ । केही तालिम, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाहरू भए पनि समन्वयको अभाव छ ।
पर्यटन, होटल क्षेत्रमा युवाशक्ति अत्यधिक प्रयोग हुन सक्थ्यो, तर विश्वव्यापी महामारीले यो क्षेत्र उकासिन अब धेरै नै समय लाग्नेछ । बढ्दो युवा जनसंख्यालाई उद्यमशीलता अभियानमा सरिक गराउन सके मुलुकमै उद्योग धन्दाहरू फस्टाउने थिए, तर सरकारलाई लगानीको वातावरण तय गर्ने फुर्सदै छैन । कालापानी, लिम्पियाधारा हेर्ने कि मेचीदेखि कालीसम्मको पूरै दक्षिणी भेगमा सिमा समस्या छ त्यता हेर्ने कि ? सत्तासीन दलभित्र किचलो छ, बैठक बस्ने भन्दै मिति टार्नेतिर ध्याउन्न छ, कता हेर्ने कता नहेर्ने । निहुँ पाएका बेला लकडाउनको म्याद थपिँदा भइहाल्छ । विषयपिच्छे सरकालाई जनताले औला ठड्याइरहेका छन्, सबैलाई थामथुम कसरी गराउने हो । मानौँ सबैतिर सकस छ अहिले । देशमा उत्पादन वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण छैन । कोरोनाको राहत बाँड्न पनि विदेशी चामल आवश्यक छ, आहा देशमा कस्तो लाजमर्दो अवस्था छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । नेपाली श्रम खेर जाँदा लकडाउनको एकाध महिनामा चार अर्बको तरकारी आयात गर्ने कस्तो परिवेश होला हाम्रो । ८० किमि सडक आफ्नै भूमिमा बनाइसकेर उद्घाटन गरेपछि थाहा पाउने कस्तो जाँगरिलो सरकार होला हाम्रो, धन्य नेपाली अब पनि सुखका दिन खोज्ने हो र ?
देशमा सुखका दिनको आशा गर्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मुलुकमा स्थापनाका लागि धेरै युवा शक्तिले आफ्नो जोस्, जाँगर देखाए तर त्यही जनशक्तिलाई मुलुकले विकासको अभियानमा शरीक गराउन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमी भयो । युवाको सक्रिय जोस् जाँगर मुलुकबाहिर पठाए आफ्नो विरोध कम हुन्छ भन्ने सोचियो । देशमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणमा यो प्रयोग हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूसँग सक्रिय हुनेबाहेक अरु श्रमशक्ति खेर गइरह्यो । बाल, वृद्ध, आतुर, बिरामी, अशक्तहरू त सरकारले दिए खाने हुन् । उनीहरूसँग कामको क्षमता नै के हुन्छ र ! युवाशक्तिको सहभागिताबाटै विकास र राष्ट्र निर्माण सम्भव थियो । युवाशक्ति वास्तवमा मुलुकको संवाहक नै हो । मुलुकमा जलस्रोतको कमी छैन । तर यहीँ मेलम्ची आएन, आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिएन । कतिलाई त यो दुहुनो गाई पनि भयो । विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माण, खानेपानी आपूर्तिदेखि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा हाम्रै युवा जनशक्ति प्रयोग भएको हो भने अहिलेको विषम परिवेश आउँदैनथ्यो, दुनियाँले हामीलाई हेप्ने थिएनन् ।
उच्च प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार अगाडि बर्दीधारीलाई अर्काले पिट्दा पनि हामीले हेरिरहनु प-यो, कानूनले ठीक पार्ने ठाउँ एउटा पाटो होला तर इज्जत गएन ? दक्षिण सिमानामा पनि त नपिटेको छ त ? यत्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् युवाशक्ति प्रयोग हुन सक्दैन त्यहाँ ? अरुले ठीक्क पारपछि साँचो मात्र लिने ? जहिले पनि हामीले आफुलाई हिनताबोध मात्र गरिरहने ? यत्रा सडक र जल विद्युत् परियोजनाहरू छन् मेलम्ची, अरुण, सिक्टा, राजमार्ग, दु्रतमार्ग भनौं सारा विकास निर्माणमा नेपाली युवाशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ नि । जहिले पनि विदेशीकै मुख ताक्ने हाम्रो बानीले अब सडक र घर वरिपरि सफा गर्न पनि विदेशी नै आउँछ भन्ने मानसिकता बसिसक्यो । कुचो लाउन विदेशी, फोहोर फाल्न विदेशी, घर बनाइदिन विदेशी, दाह्रीजुँगा, कपाल काट्न विदेशी सबै काममा विदेशी अनि आफू पनि विदेशकै मात्र चाहना गर्ने हो भने मुलुकको गौरव र स्वाभिमान बन्धकमा पर्न सक्छ नि ।
रोजगारीका सम्भावना : राष्ट्रभित्रै रोजगारीको अवसर दिएर राष्ट्र हितमै प्रयोग गरिनुपर्छ नयाँ पुस्तालाई । लाखौंलाख वर्षेनी बजारमा बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू उनीहरूको श्रम, सीप र पैसालाई मुलुकले सदुपयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो उत्पादनलाई सहज बजार पहुँच हुने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिन सक्नु पर्छ । युवामा प्रविधिमैत्री शिक्षाको जरुरी छ । सीपमूलक तालिमबाट आत्म निर्भर बनाउने अवसर दिलाउनुपर्छ । राज्यका हरेक तहमा युवा पहुँचको वातावरण तय हुनुपर्छ । खेतबारी सबै बाँझो छ अहिले । कृषि जमीनको उपयोग, पशुपालन, मत्स्यपालन, भेडा, चौरी, फलपूmल खेती, चिया, अलैँची उत्पादन, बजार विविधीकरणमा युवाशक्ति प्रयोग हुन सक्छ । समाजमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, विभेद, हिंसा, छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक अभियानमा युवा शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
सबै तहका विकास निर्माण प्रक्रियामा, योजनाको तर्जुमा, छलफल, योजना कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकनमा नयाँ पिँढीलाई सामेल गराउन जरुरी छ । प्रकोप व्यवस्थापन, प्राकृतिक र मानव निर्मित दुर्घटनाहरूबाट बच्न, वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्न, अन्य निकायहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य गर्न उनीहरूको परिचालन जरुरी छ । नैतिक र इमानदारीताको पाठ सिकाउन पनि युवाशक्तिको प्रयोग हुनसक्छ, आजको समाजमा । असल शिक्षाको अभावमा हाम्रा युवा शक्ति पश्चिमीकरणतिर लागेको छ । पश्चिमी संस्कृतिलाई सर्वस्व ठानिरहेको छ । कतिपय हिंसाग्रस्त परिवेश र समाजमा हुर्केका कारण तन्नेरीहरू आफ्ना अभिभावकहरूबाट समेत टाढिएका छन् । प्रेमालापमा, अपरिपक्व प्रेममा आतुर छन् । सामाजिक सन्जालमा मात्र व्यस्त छन् । धुम्रपान र मद्यपान, दुव्र्यसनमा सरिक छन् । पहिरनमा मात्र सजिएर युवा युवतीको भेषमा मात्र ध्यान दिएर समय खेर फालिरहेका छन् ।
कार्लमाक्र्स, सिद्धार्थ गौतम, नेपोलियन, महात्मा गान्धीहरूलाई पनि युवा जोस् नआएको होइन तर उनीहरूले यस्ता होस् जोस्लाई शक्तिमा, सुनौला विचारमा परिणत गरे आफ्नो जीवन धन्य र सुरम्य बनाए । देवकोटा, मोतिराम, भानुभक्त, पृथ्वीनारायणहरू युवा नै थिए कत्रा कत्रा नाम कमाए । हाम्रा युवा समृद्धिको चाहना राख्दै राजनीतिको फोस्रो नारातिर लाग्छन्, पैसाको बलमा उच्च तहमा पुग्ने प्रयास गर्छन्,श्रम मिहिनेतविना नै धनी बन्ने, पसिनाबेगर नै ठूला उद्यमी, व्यापारी बन्ने सोच राख्छन् । लामो अध्ययन अथक परिश्रमविना नै ठूलो बन्ने प्रयास गर्छन्, अरुको देखासिकी गरेर अरुको नक्कल गरेर अरुको कुरा काटेर नै दिन बिताउँछन्, सामाजिक जीवनको मर्मलाई बिर्सन्छन्, यसबाट उनीहरूलाई दीर्घकालीन लाभ मिल्दैन । विगतमा हाम्रा प्राज्ञिक, शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन सकिएन पलस्वरूप हामी धेरै पछाडि परिरहेका छौँ, हाम्रा युवाशक्तिलाई अहिले हामीले ५० डिग्रीमाथिको तापक्रम खाडीक्षेत्रमा खोज्नु परेको छ । औसत आठ/दश वटा दैनिक बाकस बन्दी भएर फर्केका उदाहरण पनि छन् । अतः सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने युवाका सामुहिक शक्तिविना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन, यिनीहरूको अथक र निरन्तर प्रयास बिना हामी सबैको सुनौलो भविष्य सम्भव छैन ।
बदलिएकोे प्रिवेश, पुरानो शैली : सक्षम जनशक्ति तयार गरी देश निर्माण गर्ने अभिप्राय समेतले देशमा संघीय शासन प्रणाली ल्याइएको हो । देशमा आम व्यक्तिको चाहना पूरा होला भन्ने मनसायले यस्तो शासन प्रणाली विकसित गरिएको हो । तर आम जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेनन्, सत्ता सन्चालनका पात्रहरू उही रहे प्रवृत्ति बदलिएन, झन्झन् नेपालीहरू कठीन परिस्थितिको अनुभव गरिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक प्र्रणाली आफैंमा मूल साध्य होइन, साधन मात्र हो । सञ्चालकको हातमा हुन्छ सबै कुरा । हामी अहिले यसको परीक्षणमा छौँ । संघीयताका निश्चित आधारहरू तय नै भएका छैनन् ।
हाम्रो मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक धरातलमा रहेको सानो, कोमल र अत्यन्त पिछडिएको गरिब मुलुक हो । यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू बहुतै कम छन् । सूचना प्रविधिसँग भर्खरै बामे सर्न लागेको छ, दुर्गम क्षेत्र धेरै छ । सडक, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, रोजगारी, उद्योग, वातावरण झण्डै दयनीय अवस्थामा रहेको बहुल प्राकृतिक अवस्थामा रहेको हाम्रो भूभागको क्षेत्रफल विश्वमान चित्रमा केवल शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत भू–भाग मात्र रहेको र अधिकांश यसको क्षेत्र पनि हिमाली, चट्टानयुक्त पहाडी दूर्गम क्षेत्रहरू धेरै छन् । राजधानी काठमाडौँको फोहर, प्रदूषण, खानेपानीको आपूर्ति, विद्युत्को संकट, हरपलमा इन्धनको समस्या, केन्द्रलाई जोड्ने सार्वजनिक सडक एवं यातायातको स्थिति र दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने हवाइ सेवाको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता हाम्रा लागि विगतका झैं राजनीतिक प्रणालीका बहुल परीक्षणझैं नै साबित नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन । उब्जनी र यातायातको दृष्टिले तराई क्षेत्रमा यसको संभाव्यता देखिए पनि हिमाल, पहाड, तराई कोही छैनन् हाम्रा पराई भन्ने भनाइलाई दृष्टिगत गर्दा तराईको भागलाई मात्र हेर्न मिल्दैन ।
शासन पद्धतिमा आम जनसहभागिताको आवश्यकता हुन्छ । अहिले एक दलले सबै मिलाउने त्यो पनि हानथाप हुने, आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्नेजस्ता अवस्था सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँड, साधन र स्रोतको पूर्ण परिचालन अधिकारको प्रत्यायोजन संघीयताको मर्म हो । जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने गरी स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन् । तर, कोरोनाको संकटमा परेका बखत नेपालीहरूले संघीयताको रसास्वादन गर्न सकेनन् । बरु आम जनताहरू फुटबलजस्ता भए, विराटनगरले चलानी गरेर पठाएको बस र तिनका यात्रुलाई नागढुंगामा रोकियो, रातभर नारा लाउनु प-यो । आफ्नो घर आइपुग्दा पनि घर जान पाऊँ भन्दा ओइलिएर सडकमा रहनु प-यो । प्रदेश सरकार, सांसद विकास कोषको औचित्य नै देखिएन । राज्य सञ्चालनमा, संघात्मक राज्य प्रणालीमा केन्द्रले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो भने प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बढी हुनुपर्ने थियो । तर, अहिले दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो देखाउन सकेनन् । हेर्दा लाग्छ परिवेश बदलियो तर शैली पुरानै रह्यो ।
र अन्त्यमा, हाम्रो मूलभूत मुद्दा भनेको राज्यसत्ता र जनताबीचको दूरी कम गर्ने नै हो । आम जनताले राज्यसत्ता मेरो हो, मेरो साथमा छ, मेरै वरिपरि छ, आफैँसँग छ भन्ने महसुस गर्नसक्ने वातावरण तय भएमा र विकासको साझा चौतारीमुनि ओतलाग्न सक्ने परिवेश निर्माण भएमा, सवैले आफू समृद्धशाली हुने, सुरक्षित हुने, स्वाभीमानी भई आत्मउन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्ने वातावरण तय भएमा हामी सबैका लागि सर्वकल्याणकारी हुन जान्छ । जनताको मायावाट टाढा रहने कुनै पनि स्वरूप, संघसंस्था, संगठन दिगो नहुने कुरा त सवैका सामु घामझै छर्लङ्ग भैसकेको नै छ । जुनसुकै आधारमा संघीयताको स्वरूप निर्धारण भए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक अधिकारसहितको संघीयता आजको आवश्यकता हो । संघीयराज्य निर्माण गरेर आम जनताका अधिकारका सवालमा फेरि केन्द्रमै धाउनुपर्ने परिवेश बाँकी रह्यो भने संघीयताको स्वरूपको कुनै अर्थ रहँदैन ।
हाम्रो देशको व्यवस्थाप्रति असन्तोष बढेको छ । समयमै यसको कारण पत्तालगाई समाधान गर्न जरुरी छ । स्थानीय आर्थिक स्रोत, प्राकृतिक साधन एवं कच्चा पदार्थ, मानवीय एवं अन्य स्रोत साधन तथा परिचालन समेतको क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी छ । स्थानीय भूगोल, भौगोलिक समानता, भूगोल अनुसारको स्थानीय परिवेश, संस्कृति, रहनसहन, समाजिक परिवेश, रीति, स्थिति, ऐतिहासिक प्रचलन, सभ्यता आदि विषय वस्तुहरूप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनचासो, जनस्तर, क्षमता, दक्षता, कुशलता, आमजनताको रुचि, विषयवस्तुप्रतिको चाहना, जीवनस्तरका मूलभूत विषयवस्तुहरूप्रति चासो नै गएन सरकारको । केन्द्र र प्रान्तबीच, स्थानीय संघका बीच, स्थानीय सरकारका बीच समन्वय गर्ने क्षमता, मध्यस्थताको खुबी, शक्ति बाँडफाँडका विषयबस्तुहरू, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डताका साझा विषयवस्तुहरूप्रति चासो भएन ।
मुलुकको विधायिका शक्तिलाई ध्यान दिँदै शक्ति सन्तुलनदेखि प्राकृतिक भण्डारको बाँडफाँड, राज्य प्रशासन सञ्चालनको मूलभूत मुद्दाहरू, न्यायालयको स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्यादेखि कर प्रशासनसम्मका विषयवस्तुदेखि प्रान्तीय, संघीय सीमाका विषयवस्तुहरूसम्म समग्रमा संविधानतः विषयवस्तुहरू रेखाङ्कित भएका देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो देखिएन । राज्यशक्तिको प्रयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विषयसम्म र कूटनीतिक विषयवस्तुहरूसम्मको रेखाङ्कन संविधानतः व्यवस्थित हुन्छन्, संघीयतामा । तर, जसो गर्दा पनि बालुवाटार धाउनेबाहेक केही काम भएको देखिएन । (आर्थिक दैनिकबाट)
सेयर कारोबार जेठ ३२ गतेसम्म नै बन्द
ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा प्रदेश नं. ५ लाई २५ लाख रूपैयाँ सहयोग
बैंक अफ काठमाडौँद्वारा वीर अस्पताललाई पीपीर्ई सहयोग
मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्न स्वीकृति
नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्वारा आफ्ना सबै कर्मचारीको कोरोना बीमा
महिला सहयात्रा लघुवित्तको नाफा ओरालो लाग्यो
मानुुषी लघुुवित्तको तेस्रो त्रैमासिक नाफा ५२ लाख ९७ हजार
चौतारी लघुुवित्तले कमायो दुुई करोड ६८ लाख
राष्ट्र बैंकद्वारा चार अर्ब रूपैयाँको बचतपत्र बिक्री अवधि थप